ပန်ဂရမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပန်ဂရမ် (အင်္ဂလိပ်: Pangram) ဆိုသည်မှာ ဝါကျတစ်ခုအတွင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကား၏ အက္ခရာများ၊ ရေးထုံးများ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပါဝင်သည့် ဝါကျတစ်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယင်းဝါကျသည် ထိုက်သင့်သည့် တိုတောင်းမှုလိုအပ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ အက္ခရာအားလုံးကို အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်စီသုံးထားသည့် ဝါကျကို ခေါ်သည်။ ပန်ဂရမ်သည် တိုလေ ရေးရခက်လေဖြစ်သည်။ "The quick brown fox jumps over the lazy dog" သည် ထင်ရှားသည့် အင်္ဂလိပ် ပန်ဂရမ် ဖြစ်သည်။ မြန်မာပန်ဂရမ်မှာ "သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေးဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။" ဖြစ်သည်။
၂ ဘာသာစကားအလိုက် ပန်ဂရမ်များ
၂.၁၀.၁ မြန်မာပန်ဂရမ်တွင် ပါဝင်သည့် အချက်များ
၂.၁၀.၂ မြန်မာပန်ဂရမ်ပေါ်ထွက်လာမှု နောက်ခံဖြစ်ရပ်များ
၂.၁၀.၂.၁ မြန်မာပန်ဂရမ် ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးသူနှင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည် နေရာ
၂.၁၀.၃ မြန်မာပန်ဂရမ်ကို စတင်တီထွင်သူ
၂.၁၀.၄ အဆင့်ဆင့် ဖန်တီးခဲ့ပုံ
၂.၁၀.၅ မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် မြန်မာပန်ဂရမ်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းနှင့် သတင်းဆောင်းပါးများ
ပန်ဂရမ်များကို စာလုံးပုံစံများ ဖော်ပြရန် သုံးလေ့ရှိသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင်ရှိသည့် အင်္ဂလိပ်ပန်ဂရမ်မှာ The quick brown fox jumps over the lazy dog.ဖြစ်သည်။
This poem is perfect pangram, which means there is only one letter of each glyph.
မြန်မာပန်ဂရမ်ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သူ ဦးငွေထွန်း(ဝဲဖက်ပုံ)နှင့် ပထမဆုံးမြန်မာပန်ဂရမ်ဖန်တီးရေးသားခဲ့သူ ဦးမောင်မောင်ဆန်း(ယာဖက်ပုံ)
မြန်မာပန်ဂရမ်မှာ "သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။" ဟုဖြစ်ပြီး ယင်းသည် မြန်မာဘာသာစကားအတွက် ပထမဆုံးဟု ပြောဆိုနိုင်သည့် မြန်မာပန်ဂရမ်ဖြစ်သည်။
မြန်မာပန်ဂရမ်တွင် ပါဝင်သည့် အချက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာပန်ဂရမ်တွင် မြန်မာအက္ခရာ ၃၄ လုံး(ညကလေးအပါအဝင်) အပါအဝင် ပင့် (ျ)၊ ရစ်(ြ)၊ ဆွဲ(ွ)၊ ထိုး(ှ)၊ ဝစ္စနှစ်လုံးပေါက်(း)၊ အောက်ကမြှင့်(့)၊ သေးသေးတင် (ံ)တို့ပါဝင်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ အောက်ပါအက္ခရာနှင့် သရများ ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။
(၂) ျြွ ှ
သဝေထိုးနှင့် အထူးအက္ခရာများ ပါရန် မလို။
မြန်မာပန်ဂရမ် ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပေးသူနှင့် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည် နေရာ[ပြင်ဆင်ရန်]
မြန်မာပန်ဂရမ်ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကို ဆော့စ်ဝဲလ်စလူးရှင်းမှ စီအီးအို ဦးငွေထွန်းက myanmaritpro ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖိတ်ခေါ်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာပန်ဂရမ်ကို စတင်တီထွင်ခဲ့သူမှာ ဦးမောင်မောင်ဆန်း ဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၉ ဒီဇင်ဘာတွင် မောင်မောင်ဆန်းသည် ရှေးဦးမြန်မာပန်ဂရမ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။
မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် မြန်မာပန်ဂရမ်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းနှင့် သတင်းဆောင်းပါးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ပထမဆုံးမြန်မာပန်ဂရမ်၏ သတင်းနှင့် သတင်းဆောင်းပါးကို အလင်းတန်းဂျာနယ်တွင် ၂၅ ရက်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး မိုးမခသတင်း ဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်း ဖော်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် myanmar-myanmar.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်လည်း မြန်မာပန်ဂရမ်သတင်းကို ပန်ဂရမ်ထွက်ပေါ်ပြီး ရက်ပိုင်းတွင် လွင့်တင်ပေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
Wikimedia Commons တွင် Typeface pangram samples နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
www.myanmaritpro.com Archived 28 December 2013 at the Wayback Machine.
www.myanmar-myanmar.com Archived 16 January 2020 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပန်ဂရမ်&oldid=696949" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။